11 “Bere a Israel yɛ abarimaa no, na medɔ no,+ na Egypt na mefrɛɛ me ba fii.+ 2 “Wɔfrɛɛ wɔn,+ nanso wogu so refrɛ wɔn no, na wɔretwe wɔn ho kɔ.+ Wɔkɔɔ so ara bɔɔ afɔre maa Baal ahoni,+ na wɔmaa wɔn afɔrebɔde fii wusiw maa abosom.+ 3 Nanso me na mekyerɛɛ Efraim nantew,+ na mituruu wɔn m’abasa so;+ na wɔanhu sɛ me na mesaa wɔn yare.+ 4 Mede ɔdesani hama na ɛtwee wɔn; ɔdɔ hama na mede yɛɛ saa,+ enti meyɛɛ sɛ wɔn a woyi kɔndua fi wɔn kɔn*+ ho, na mede brɛbrɛ maa wɔn nyinaa aduan.+ 5 Ɔrensan nkɔ Egypt asase so bio, nanso Asiria bɛyɛ ne hene+ efisɛ wɔpoe sɛ wɔbɛsan aba me nkyɛn.+ 6 Na nkrante bedi ahim wɔ ne nkurow mu,+ na ɛbɛsɛe n’adaban na amene wɔn,+ wɔn agyinatu nti.+ 7 Me man nni me nokware.+ Sɛ wɔfrɛ wɔn ɔsorosoroni no nkyɛn a, wɔn mu biara nsɔre mpo. 8 “Mɛyɛ dɛn apo wo, Efraim?+ Mɛyɛ dɛn ayi wo ama, Israel?+ Mɛyɛ dɛn abu wo sɛ Adma?+ Mɛyɛ dɛn ayɛ wo sɛ Seboiim?+ Me koma adan wɔ me mu,+ na me yam hyehye me sɛ ogya. 9 Me bo remfuw wo,+ na merensɛe Efraim bio,+ efisɛ meyɛ Onyankopɔn,+ menyɛ onipa. Mene Ɔkronkronni a ɔwɔ mo mu no;+ meremfa anibere mma mo so. 10 Wobedi Yehowa akyi.+ Na ɔbɛbobom te sɛ gyata;+ ɔbɛbobom+ na ne mma de ahopopo afi atɔe fam aba.+ 11 Wɔde ahopopo befi Egypt aba+ te sɛ anomaa, na wobefi Asiria aba te sɛ aborɔnoma,+ na mɛma wɔatenatena wɔn afie mu,” Yehowa asɛm ni.+ 12 “Efraim de atorodi atwa me ho ahyia,+ na Israel fie de nnaadaa atwa me ho asi. Nanso Yuda ne Onyankopɔn na ɛnam,+ na odi Ɔkronkronni no nokware.”
^ Nea ɛkyerɛ ankasa ne, “abogye.”